ငါဆိုင်ကယ်ထိန်သိမ်းဘို့ခေါင်မိုးအရက်ဆိုင်များလိုအပ်ပါသလား? - စက်ဘီး
အဓိက > စက်ဘီး > ခေါင်မိုးခေါက်စက်ဘီးလေယာဉ်တင်သင်္ဘော - ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းချက်
ခေါင်မိုးခေါက်စက်ဘီးလေယာဉ်တင်သင်္ဘော - ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းချက်
ခေါင်မိုးတပ်ဆင်ထားစက်ဘီးထိန်သိမ်းလိုအပ်ပါတယ်အပေါ်တပ်ဆင်ထားခံရဖို့ခေါင်မိုးအရက်ဆိုင်သင့်ရဲ့ကားရဲ့ထိပ်မှာတပ်ဆင်ထားကြသည်။ အကယ်၍ ဤအရာသည်သင်နှစ်သက်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သော်လည်းသင်လက်ရှိမဟုတ်ပါရှိသည်သင်တစ်လုပ်နိုင်သင်၏ကားအတွက် set ကိုရှာရန်သို့မဟုတ်အကူအညီတောင်းရန်စတိုးဆိုင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး အားမေးမြန်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းစနစ်ကိုအသုံးပြုပါ။
သင်၏စက်ဘီးစီးမှုပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အဆင်သင့်ရှိသည့်ဤရက်သတ္တပတ်၏ GCN Tech Clinic ကိုကြိုဆိုပါ၏။ သင့်တွင်တစ်ခုရှိပါက၎င်းကိုအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအပိုင်း၌ထားခဲ့ပါ။ မည်သူသိမည်နည်း။ ငါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အနာဂတ်ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာဖြေရှင်းပေမယ့်ယခုအပတ်ပထမ ဦး ဆုံးမေးခွန်းကိုအပေါ်ကိုရွှေ့။
ပြီးတော့အဲဒါက Martin H မှဖြစ်ပြီး၊ နောက်ကွယ်မှာပင်စည်နှင့်ပင်စည်ပြwithနာရှိနေတယ်။ သငျသညျထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အလားတူ drop သို့ဆင်းသွားသည့်အခါ, ပင်စည်ထဲမှာလက်ကိုင်ရှေ့ကိုအစွန်အဖျား။ သင်အကြိမ်အနည်းငယ်ရပ်တန့်ပြီးပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်ကိရိယာများကိုထုတ်ယူရသည်။
သူတို့ကလိုလားတဲ့လက်ကိုင်နှင့်လူမီနီယံပင်စည်ရှိသည်။ သင်ကလူသိများတဲ့တံဆိပ် torque လိမ်ဖဲ့ခြင်းအားဖြင့်မှန်ကန်သော torque သို့တင်းကျပ်ခဲ့ပြီးပြstillနာကဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီဟာကတစ်ခုခုလုပ်လို့ရမလား မာတင်။
၎င်းသည်လက်ကိုင်ဘားနှစ်ခုလုံးကိုတိုင်းတာ။ အချို့သော calipers များနှင့်အတူရပ်တန့်သင့်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်လေဖြတ်ခြင်း၊ အခုတော့ငါထင်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်တကယ်ရှိခဲ့တယ် ၃၁.၇ မီလီမီတာလက်ကိုင်ဟာပုံမှန် ၃၁.၈ အစား
နောက်ပြီးလက်ကိုင်ဘားပုံစံဟောင်းတွေမှာငါတို့မှာအီး ၂၅.၄၊ ၂၅.၆၊ ၂၅.၂၊ သင့်ဘဝဟာအခြေခံအားဖြင့် Handlebar မှာပြaနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီးပထမ ဦး ဆုံးပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ငါပြောခဲ့သလိုငါဒါတွေကိုတိုင်းတာ၊ စစ်ဆေးခဲ့တယ်၊ မှန်ကန်တဲ့ငွေပမာဏကိုဆွဲနေပါတယ်။
သင်သည်စတင်စဉ်းစားရန်မစဉ်းစားလိုသောကြောင့်အလူမီနီယမ်သည်အတော်အတန်ပေါ့ပါးပြီးပျက်စီးလွယ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးရွေးစရာမှာလက်ကိုင်သစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပင်စည်အသစ်တစ်ခုဝယ်ရန်သို့မဟုတ်တနည်းအားဖြင့်တူညီသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှစုံတွဲတစ်တွဲကိုအတူတကွကောင်းမွန်စွာအတူတူ ၀ ယ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ TezAllez က 'Hi Jon၊ ရေပိုက်အဆို့ရှင် disk ရဲ့အမှတ်ကဘာလဲ? စည်းမျဉ်းများကိုဖယ်ရှားသင့်သည် 'ဒါကမေးခွန်းကောင်းတစ်ခုပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူအများစုကပိုက်ဆံအသစ်တစ်ခုကို install လုပ်တဲ့အခါအဲဒါကိုအမှိုက်ပုံးထဲကိုဖြောင့်ပစ်လိုက်ကြတယ်။
ယခုငါပုံမှန်စံသေတ္တာပရိုဖိုင်းကိုဘီးကိုသုံးလေ့, သင်သိသော, ပြားချပ်ချပ်အနားကွပ်။ အကြောင်းပြချက်မှာသင့်တွင်ပါရှိသည့် Pa တွင်လက်တစ်စုပ်စက်တစ်ခုရှိပါက ricularis တက်ခြင်းသည်အနည်းငယ်လှည့်ပတ်သွားပြီး torque အနည်းငယ်ပိုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မင်းကငါလိုသနားစရာ၊ သေးငယ်သောလက်နက်များရှိပါကသင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ ပေးစရာများစွာရှိပါသည်။ ထပ်မံ၍ ၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်အဆို့ရှင်အဆို့ရှင်အတွင်းခေါက်။ တစ်ခါတစ်ရံ၌ပင်အဆို့ရှင်မှပင်အဆို့ရှင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးသင့်ကိုလွင့်မျောစေနိုင်သည်။
သို့သော်နက်ရှိုင်းသောပရိုဖိုင်းဘီးများပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုမမြင်လိုကြသောကြောင့်အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အနားကွပ်၏ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအချက်အလက်များသည်အဆို့ရှင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအဘို့, သင်သည်ထိုသူတို့လိုက်နာရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျလိုလျှင်သူတို့ကိုအပေါ်ချန်ထားပါ။ နောက်တစ်ခုမှာ Tc မှသူ၏ circuit နှင့် ပတ်သတ်၍ ပြproblemနာရှိသည့်မေးခွန်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်က Shimano 105 ကိုအသုံးပြုနေပြီး Tc က cetteette ရဲ့ဗဟိုဆီသို့ရွှေ့လိုက်တဲ့အခါကွင်းဆက်က cassette ရဲ့သွားပေါ်ကိုခုန်လိမ့်မယ်။
ဖြစ်ပျက်သည့်အခါမပြောင်းလဲပါ။ သို့သော်၎င်းသည်လျှောနေသည်။ ကွင်းဆက်အရမ်းတိုလို့လား။ ဒါကကက်ဆက်အလယ်ဗဟိုထက်ပိုပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့ရင်ငါမပြောခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးမှတ်တိုင်ကကက်ဆက်ရဲ့သွားကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ချွန်ထက်မှုမရှိအောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့ကိုစိတ်ထိခိုက်စေနိုင်ပြီးချောချောမွေ့မွေ့ကောင်းမွန်တဲ့အရာဖြစ်ပီးသူတို့ကငါးမန်းအံသွားလို့မဖြစ်ပါဘူး။
ပြီးတော့သင့်ရဲ့ကွင်းဆက်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ၎င်းအတွက်ကွင်းဆက်စမ်းသပ်သူဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကွင်းဆက်အားလုံးအား ၀ တ်ဆင်ထားသည်ကိုသင်အမှန်တကယ်တိုင်းတာနိုင်သည်။ derailleur ဆွဲကြိုးကိုလည်းသင်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
အခုတော့လုပ်သူကိုယ်တိုင်မှာဥပမာအားဖြင့်နောက်ဘက် derailleur alignment tool တစ်ခုရှိဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်သင့်ဒေသဆိုင်ကယ်ဆိုင်သို့ယူသွားပြီးနောက်ဘက်ဆွဲကြိုးဆွဲကြိုးသည်သန့်ရှင်းဖြောင့်ဖြောင့်ကြောင်းသေချာပါစေ။ အဲ့ဒါကစက်ဘီးစီးတာပဲ။
ဒီအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်၊ သင်လုပ်နိုင်တဲ့နောက်ဆုံးအရာကသင့်ရဲ့ကွင်းဆက်မှာခိုင်မာသောချိတ်ဆက်မှုမရှိဘူးဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီဥပမာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကွင်းဆက်ပြောင်းပါ
ထိုသို့ဆိုပါကခိုင်မာသောချိတ်ဆက်မှု၏တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင်ကွင်းဆက်ကိုနောက်သို့လှည့်လိုက်ရုံနှင့်၎င်းကိုလွှတ်သင့်သည်။ နောက်တစ်ခု Jared Fontaine derailleur ကြိုးကွင်းကနေမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အိုးမယာရက်။
ကောင်းပြီ, derailleur, ဒါကြောင့်အပေါငျးတို့သဝက်အူမပါဘူးနှင့်သင်နောက်ကျောကက်ဆက်၏ 28 သွားသို့မသွားနိုင်ပါ။ မည်သည့် hack စသည်တို့သည် derailleur ချိတ်တွဲသို့မဟုတ် derailleur အသစ်ဝယ်သည်။ အခု Jared က ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာပေါ့၊ မင်းဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာငါမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းကယာယီသိမ်းဆည်းဖို့ကြိုးစားနိုင်တယ်။
ဒါကြောင့်နောက်ဘက် derailleur ကိုဆွဲကြိုးပေါ်ချည်မယ်၊ အတွင်းပိုင်းကနေကြိုးအသစ်တစ်ခုကိုအစားထိုးသုံးကြည့်ပါ။ သင်လုပ်နိုင်လျှင်၎င်းသည်သတင်းကောင်းဖြစ်ပြီးသင်မှာယူမည့်အသစ်စက်စက်ရေငုပ်သင်္ဘောအသစ်ရောက်ရှိလာသည်အထိအချိန်အနည်းငယ်သက်သာလိမ့်မည်။
ဒီမှာသိကောင်းစရာ, အွန်လိုင်းအနည်းငယ်သုတေသနလုပ်ပါ။ ကြီးမားတဲ့အကွာအဝေးကိုကမ်းလှမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်အနည်းငယ်ရှိသေးသည်ကိုငါသိ၏။ h ကွဲပြားသော derailleur ချိတ်ဆွဲရန်ရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးရှိသည်။ CNC လူမီနီယံရရှိရန်ကြိုးစားပါ။
၎င်းသည်သတ္တုစပ်ပြုလုပ်ထားသောသတ္တုစပ်များနှင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းထက်ပိုမိုတင်းကျပ်ပြီးသင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဂီယာပြောင်းမှုကိုရရှိလိမ့်မည်။ သင်၏မေးခွန်း ၂ ၏အဖြေအတွက်နောက်ကျောနောက်ကျောလှည့်ယာဉ်အသစ်တစ်ခုကိုသင်ဝယ်စရာမလိုသည်ကိုသတိပြုပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမှန်တကယ်ဝက်အူသည် derailleur ဆွဲကြိုးကိုယ်နှိုက်ထက် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ နောက်တဖန် David Pfannenstiel မှသင်၏ပြုပြင်ထုပ်ပိုးမှုကိရိယာတွင် 'ဘယ်လိုအဝတ်အစားတွေကိုမင်းအသုံးပြုနေတာလဲ၊ ဘယ်မှာမင်းကိုသုံးတာလဲ' ဟုမေးသည့်မေးခွန်းဖြစ်သည်။ ဒါနဲ့မတူတဲ့သူတွေကိုသုံးတယ်။
Microfiber သည်သင်ဆေးကြောပြီးလျှင်စက်ဘီးသို့မဟုတ်ဘောင်နှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုခြောက်သွေ့စေသည်။ ငါ့အိမ်တွန်းရာမှဖိအားပေးသောလေအချို့ကိုမသုံးသောအခါ၊ ထို့အပြင်ဤမိုက်ခရိုဖိုင်ဘာအထည်များသည်ဖယောင်းများကိုဘောင်တစ်ခုတွင် ကပ်၍ အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးစက်ဘီးကိုလှပပြီးသန့်ရှင်းနေစေရန်ပြုလုပ်ပေးသည်။
ယိုဖိတ်မှုကိုရှင်းလင်းရန်ကျွန်ုပ်စက္ကူလက်သုတ်ပုဝါများသို့မဟုတ်သတင်းစာများကိုအသုံးပြုသည်။ ဤအရာတစ်ခုခုကိုရှိသည်ဖို့မကြိုးစားပါ, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့ဖြစ်ပျက်။ ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့တနည်းဟောင်းအဟောင်းစုတ်,
အမှန်တကယ်ဟောင်းနွမ်းသောအစိတ်အပိုင်းများကိုသန့်ရှင်းရေးအတွက်တီရှပ်များ၊ ဆွယ်တာအင်္ကျီများ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီများ၊ အမဲဆီနှင့်အညစ်အကြေးများအားလုံးကိုသုတ်လိုက်ပါ။
အခုဆိုရင်မေးခွန်းတစ်ခုရပြီ၊ ဘာဗာနဗစိုမိုဂျီကငါဒီကိုငါချစ်တယ်၊ ငါ Drillium နှင့်အတူသိမ်းဆည်းနိုင်ပါသလား? ငါ၌သံမဏိပြိုင်ဆိုင်ကယ်အဟောင်းတစ်လုံးရှိသည်။ ဟုတ်တယ်၊ ငါမင်းအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာအဖြေတစ်ခုပေးချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကြောက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းဘာလုပ်မယ်ဆိုတာမသေချာလို့ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်မသိသောသူများအတွက် Drillium သည်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်တစ်ခုခုအတွက်တွင်းတူးသည့်လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
စက်ဘီးအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် '၇၀ နှင့် ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ' တွင်အရူးအမူးစွဲလမ်းခဲ့သည်။ သူတို့ဟာရုတ်တရက်အားထုတ်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါဘယ်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုပျက်ဆီးစေနိုင်တာကြောင့်အထူးသဖြင့်လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာ cranks, brake lever, pedals, derailleurs, chainrings, ထိုကဲ့သို့သောအရာများအားဖြင့်တွင်းတူးတာကိုစတင်ပြီးတာနဲ့စတင်သည်က အစိတ်အပိုင်းအားနည်းစေရန်။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်အကြံဥာဏ်ကမင်းဒါကိုလုပ်သင့်တဲ့နည်းလမ်းမရှိဘူး၊ အလေးချိန်ချွေတာမှုအတွက်သင်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတော်တော်လေးများတဲ့ပမာဏကိုရလိမ့်မယ်။
သို့သော်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၌လည်းအချို့သောကိုယ်အလေးချိန်နည်းသွားနိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုအစိတ်အပိုင်းများကိုဖမ်းယူပါကသွားအနည်းငယ်နည်းသွားနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်မလုပ်ပါနဲ့ မိုက်ကယ်အိုနေးလ်မှသူ၏ဘရိတ်ပြwithနာနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းတစ်ခုလာသည်။
ဒါကြောင့်သူကကုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကရှေ့ disc brake rubing ကိုကြားတဲ့အခါသူပြောတာပါ။ ကြည့်ရသည်မှာ၎င်းသည်မှန်ကန်ပြီးအခြားပြissuesနာများလည်းရှိပုံမပေါ်သော်လည်းမြန်ဆန်သောရပ်တန့်ပြီးနောက်အနည်းငယ်ပိုမိုဆိုးရွားသွားပုံရသည်။ ဟုတ်တယ်မိုက်ကယ်၊ မင်းငါ့ကိုနင့်ဘရိတ်ကိုသွေးစိမ်ဖို့လိုတယ်၊
ဒါကြောင့်ဘရိတ်ကိုသွေးထွက်ခြင်းကသင့်အားအရည်အတွက်လတ်ဆတ်စေပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်စနစ်မှလေထုအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်အခါအားလျော်စွာပိုမိုကောင်းမွန်သောဘရိတ်အုပ်ခြင်းကိုမပေးနိုင်ပါ။ တနည်းအားဖြင့် pistons များကိုယ်တိုင် caliper တွင်အနည်းငယ်စေးကပ်နိုင်သည်။
ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်နည်းတစ်နည်းမှာဘီးကိုပြုပြင်ရန်တာယာကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပစ္စတင်တစ်ခုအား caliper နှင့်ခိုင်မြဲစွာကိုင်ပြီးဘရိတ်လီဗာကိုညင်သာစွာစုပ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပစ္စတင်ကိုအမှန်တကယ် caliper မှလွတ်အောင်ကြိုးစားရန်အလွန်သတိထားပါ။ ၎င်းသည်အနည်းငယ်ဆူညံသံဖြစ်သော်လည်းသင်မလုပ်လိုပါ။ အဆိုးဆုံးမြင်ကွင်းတွင်ပစ္စတင်သည်သင်၏ caliper မှထွက်လာပြီးသင်နှင့်သင်၏လှပသောကော်ဇောကိုဆီနှင့်ဖုံးအုပ်လိမ့်မည်။
ထိုသို့ဖြစ်လျှင်နှစ်ဖက်စလုံးကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ထို့နောက်အမှိုက်များနှင့်ဖုန်မှုန့်အနည်းငယ်ကိုရရှိနိုင်သဖြင့် piston များသည်ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်ရွေ့လျားမှုကိုခွင့်မပြုသောကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ငါ့မှာရှိတဲ့ဘရိတ်တွေပေါ်မှာအမှန်တကယ် DOT အရည်အနည်းငယ်ကိုသုံးပြီးတစ်ခုခုကိုအနည်းငယ်မျှသာဖုံးအုပ်ပေးပါ။ အဲဒါကပစ္စတင်တွေကိုထွက်ပေါက်နဲ့ထွက်ပေါက်ကိုတကယ်ကူညီပေးပါတယ်။ နောက်အောက်ခြေ bracket နဲ့ပတ်သတ်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။
အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်တစ်ခါတစ်ရံအငြင်းပွားဖွယ်ရာများအမြဲတမ်းanရိယာ။ DeXe နှင့် Leonardo Lemgrube နှစ်ခုစလုံးသည် ၃၈၆ crank ကိုအီတလီချည်ဖြင့်အောက်ခြေကွင်းခတ်တွင်တပ်ဆင်လိုကြသည်။ သင်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။ ဟုတ်တယ်၊ ဒါမေးခွန်းကောင်းပဲ။
တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာ 30mm axle crank ကို UK ရဲ့အောက်ခြေ bracket ထဲကိုထည့်သွင်းချင်တယ်။ ဒီနေရာမှာရွေးစရာတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ခေတ်မှာသိပ်မများလှတဲ့အီတလီချည်မျှင်အောက်ခြေ bracket ကတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာသိပ်မများလှပါဘူး။ ရွေးချယ်မှုသင့်အတွက်မိုးလုံလေလုံသိုလှောင်မှု။ Rotor က 386 EVO ကွင်းဆက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုသေချာပေါက်အလုပ်လုပ်မည်ကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်သိသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ကျွန်ုပ်မသိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကြောက်ပါသည်။ သို့သော်လည်းငါသည်အချို့သောနဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်နှင့်အတူကအလုပ်လုပ်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်, ငါတို့ရှိသမျှသည်အောက်ခြေကွင်းခတ်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုငါသိ၏။ ဒါပေမယ့်သင်လိုအပ်တာနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတာကြောင့် rotor unit ကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။ ထို့နောက် Matt Woodford မှမေးခွန်းတစ်ခုထွက်လာသည်။
ကျွန်ုပ်၏စက်ဘီးပေါ်သို့ကျွန်ုပ်၏ဘီးများလဲလှယ်ခြင်း (သို့) Set Direct Drive Turbo ပေါ်တွင်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဂီယာများကိုချိန်ညှိရမည်နည်း။ ကျွမ်းကျင်သူများသည်စက်ဘီးကိုပြproblemsနာမရှိဘဲပြောင်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်မလုပ်နိုင်ပါသနည်း။ alignment ကိုငါ့ကိုအရူးမောင်း။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ မှန်ပါသည်၊ Matt၊ သင်၏ဘီးများအကြားရှိ locknuts အထက်ရှိသင်၏ဘီးများအကြားရှိရှင်းလင်းသောအမှန်တကယ် Direct Mount Turbo Trainer နှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားလိမ့်မည်ဟုအခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအခွင့်အရေးရှိသည်။
အကယ်၍ သင်တတ်နိုင်လျှင်ဒီကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ ၎င်းမရှိပါကစက်ဘီးမှ ထွက်၍ နောက် derailleur ကိုအမှန်တကယ်ကက်ဆက်ကြယ်ပွင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ကြည့်ပါ - သင်သည်မြန်သောလွှတ်ခြင်းကိုတင်းကျပ်စွာတင်းကျပ်နေသည်ကိုသင်တွေ့မြင်လိုသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကအရမ်းကိုဖွင့်လိုက်ရင်၊ derailleur ဆွဲကြိုးကဒီဖိအားကိုနည်းနည်းမျောသွားစေပြီးသင့်ကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ဂီယာတွေကိုမပေးနိုင်လို့ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ သင့်ကက်ဆက်ကိုမဟောင်းနွမ်းအောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကသင့်ကိုဆူညံနေတဲ့ဆူညံသံကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ညာဘက်အဒရီယန်ဝဲလ် (စ်) မှာသူတို့မှာမြည်တွန်သောရထားများရှိသည်။ သို့သော်မပြောင်းလဲပါ။ အခြားအရာတစ်ခုကိုသင်စမ်းကြည့်နိုင်ပါသလား? မှန်ပါတယ်၊ သင်စမ်းကြည့်လို့ရတဲ့အခြားမတူညီတဲ့ဖြေရှင်းနည်းနှစ်နည်းကတကယ်တော့အဲဒီမှာတကယ်တမ်းကျတော့ကြေးနီငါးပိ (သို့) anti-C အချို့ရှိတယ်။
ဒါကတစ်ချိန်ကငါ့အဘို့ creaky ကုန်းနှီးဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။ သင်စမ်းကြည့်နိုင်သည့်အခြားအရာတစ်ခုခုမှာ silicone spray ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သံကြိုးတွေကကုန်းနှီးအောက်ခြေကိုတကယ်သွားတဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြthatနာကိုဖယ်ရှားပေးမရဆိုတာကိုကြည့်ပါ။
ထိုင်ခုံညှပ်နှင့်သင်၏ထိုင်ခုံနေရာညှပ်နှစ်ခုလုံးကိုမှန်ကန်သောအတိုင်းအတာအထိတင်းကျပ်ထားကြောင်းသေချာစေပါ။ ဒီဟာကသင့်ကိုတွန့်မသွားဘဲစီးနင်းလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း Jeba မှနောက်ဆုံးမေးခွန်းကသူတို့စက်ဘီးကိုအပိုအလေးချိန်ထပ်တိုးရန်နှင့်ရှည်လျားစွာမနေရန်အတွက်စက်ဘီးအတွက်ရှေ့ခေါင်မိုးအိတ်တစ်ချောင်းကို ၀ ယ်ရန်စဉ်းစားနေသောသူဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ကားရဲ့နောက်ကျောကို Clamp ပေါ်မှာထိပ်ပြွန်ပေါ်တင်လိုက်ရင်ပိုကောင်းမလား။ လူမီနီယမ်ဘောင်နှင့်ကာဗွန်ချိတ်။
မေးခွန်းကြီးတစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်သည်စက်ဘီးရှေ့ရှေ့လမ်းဆုံလမ်းခွနှင့်ခေါင်မိုးထည်၏ရှေ့ဘီးကိုဖြတ်လိုက်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဤမေးခွန်းကိုအထူးသဖြင့်ပထမဆုံးကာဗွန်စက်ဘီးစီးသူများကဤမေးခွန်းကိုမေးခဲ့သည်။ ဒီရှေ့တန်းလမ်းဆုံလမ်းခွတစ်ခုမှာအသုံးပြုတဲ့စက်ဘီးတစ်စီးအချိန်မတန်ဘဲပျက်ကျတာကိုငါတစ်ခါမှမကြားဖူးဘူး၊ အဲဒီမှာတစ်ယောက်ယောက်ကပြောစရာရှိမှာသေချာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါသိသလောက်ကတော့လုပ်စရာတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ ။
ယခုအပတ် GCN Tech ဆေးခန်းကိုစစ်ဆေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းများကိုအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။ သူတို့ကိုငါအဖြေပေးရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါမည်။ ဒါ့အပြင်ဒီဆောင်းပါးကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးသူငယ်ချင်းများကိုဝေမျှဖို့သတိရပါ။
သင်စာရင်းသွင်းမထားပါကသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဆောင်းပါးအသစ်တစ်ခုတင်တိုင်းမင်းကိုအသိပေးနိုင်အောင်လည်းသတိပေးခေါင်းလောင်းကိုလည်းနှိပ်ပါ။ ထို့အပြင်ဆိုင်အောက်ရှိ GCN ဆိုင်ကိုစစ်ဆေးရန်မမေ့ပါနှင့်။
ယခုသီတင်းပတ်၌သင်တို့အတွက်လူသစ်များအတွက်ထုတ်ကုန်အသစ်ပင်ရှိသည့် globalcyclingnetwork.com သို့သွားပါ။ ၎င်းသည် Topeak MINI 10 ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အက္ခရာတင်ထားသော GCN လိုဂိုပါရှိသည်။ ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်သလဲ။ အခုနောက်ထပ်နောက်ထပ်ဆောင်းပါး ၂ ခုအပေါ်ခင်ဗျားဒီမှာရော၊ ဒီမှာပါကလစ်နှိပ်လိုက်ရင်ကော။
ခေါင်မိုးပေါ်စက်ဘီးထိန်သိမ်းသင့်ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဆိုင်ကယ်သင်ချင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသွား။ သင့်ရဲ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ကယ်အပေါ်ခေါင်မိုးဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏လမ်းကိုသင်၏နောက်ကျောတွင်သယ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်အတားအဆီးမရှိဟုဆိုလိုသည်။ သင်ပိုကြီးတဲ့မော်တော်ယာဉ်ရှိပါကလုပ်နိုင်များသောအားဖြင့်ပိုပြီးသယ်ဆောင်စက်ဘီးမင်းရဲ့ခေါင်မိုးတစ်ထစ် - တပ်ဆင်ထားအပေါ်ထက်ထိန်သိမ်း။
Mike Dojc Slinging Birdies သည်စက်ဘီးခမောက်ကိုဝတ်ဆင်ထားသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုမထိမိစေရန်ငါစက်ဘီးစီးရန်မည်သို့ပြောမည်ကိုငါပြပြီးနောက်ကျောကစက်ဘီးတစ်စီးကိုင်ထားသောလူအချို့ကိုသူ၏ကားပေါ်တွင် Yakima ၌တင်ခဲ့သည်။ အပေါ်ဘက်မှာပါ။ ကားမောင်းရတာကြိုက်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ အပေါ်ထပ်မှာတင်ကားရပ်ရတာအခက်ခဲဆုံး၊ အပေါ်ထပ်မှာကားရပ်ရတာခက်ခဲတယ်၊ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ခေါင်မိုးပေါ်ကတောင်ထိပ်အမျိုးအစားကိုငါရွေးတာပေါ့။ သင်မ ၀ ယ်လျှင်နောက်ကျောတွင်ထားရန်မလွယ်ကူပါ။ တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာမှာသင်ဖြတ်သန်းသွားသောအခါသီးခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိလိမ့်မည်၊ သင်သည်သင်၏စက်ဘီးကိုရှိုက်ချလိမ့်မည်။ 'ငါမင်းရဲ့ကားကိုချက်ချင်းပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီ။ ဒါကြောင့်သင်မောင်းနှင်သောဝက်အူအချို့ကိုတွန့်လိုက်ရင်သတိထားပါ။ သင်ကနိမိတ်ကို 'ထရပ်ကားမရှိ' လို့ပြောနိုင်ပြီးသင်ကထရပ်ကားမဟုတ်တဲ့အတွက်မေ့သွားတယ်။
ကောင်းပြီ။ ငါဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြမယ်။ ဒါကိုလုပ်ဖို့ငါဒီမှာလှေခါးတစ်စင်းပို့နေတယ်။ ဒါကြောင့်သင်က yakima ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုသင်အဆင်ပြေပြေပြနိုင်ပါပြီ။ အကယ်၍ သင်တပ်ဆင်လိုက်ရင်လူအချို့ကတပ်ဆင်လိုက်ရင်ဒီပိုကြီးတဲ့တက်လာလိမ့်မယ်။ စက်ဘီးကိုစစ်ဆေး၊ ဒါကြောင့်ဆိုင်ကယ်ကအိပ်ရာသေးသေးလေးမှာထိုင်ပြီးဝင်လာတယ်။
ဒါကသင့်စက်ဘီးကိုတည်ငြိမ်စေတယ်။ ငါတို့သုံးတယ် [။
သင်ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီး stepladder ကိုသုံးစရာမလိုတော့ပါဘူး။ စက်ဘီးတော်တော်လုံခြုံပါတယ် သငျသညျကိုပင်လွှတ်ပြီးတော့ဒီလမ်းခရီးတစ်လျှောက်လုံးတင်းကျပ်နိုင်ပါတယ်။
အလွယ်တကူရောက်အောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်ပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာထိုင်ပြီးသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းကိုငါမှတဆင့်ကပ်ထားရန်နှင့်ကလစ်အနည်းငယ် နှိပ်၍ အပေါ်ထပ်သို့တွန်းချပြီး Wallah တွင်ပြုလုပ်သည်။ ငါကသော့ခတ်၊ လုပ်လိုက်၊ လုပ်လိုက်ပြီ။ အခုငါဖယ်လိုက်တော့မယ်။ ဒါကစိတ်ပျက်စရာပဲ။ ငါကဘာကြောင့်ငါက ဦး ထုပ်ကို ၀ တ်ထားရပြီဖြစ်လို့ငါတွေးနေမိလား။ ငါပြောခဲ့ပေမဲ့ငါမတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရင်ဖျားနာမှုကြောင့်ကျွန်တော့်ကိုစက်ဘီးမစီးခဲ့ဘူး၊ အဲဒီစက်ဘီးကကျွန်တော့်ကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစက်ဘီးကိုဒီလိုမျိုး yakima ဖြစ်ခဲ့ရင်သင့်စက်ဘီးကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်းမှတားဆီးလိုက်သည်။ ။
သင်လုပ်ရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သေးငယ်ပါကလှေခါးထစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ငါ့မှာလှေကားတစ်ချောင်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့တံခါးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ အခုသင်ထလာတယ်။ ဒါကြောင့်ကားမောင်းသူရဲ့တံခါးဘောင်ကိုဘယ်တော့မှအသုံးမပြုဘူးဆိုတာမင်းသိတယ်၊ မင်းကမကောက်ဖို့မလိုချင်လို့ပါ။ သင် Yakak ကိုချွတ်သည့်အခါဗဟိုချက်သို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သော့ခတ်ပြီးတဲ့အခါသင်မလာမှီခြေလှမ်းတစ်လှမ်းကိုငါသိနိုင်တယ်။ သော့ကိုသင်မြင်နိုင်သလား၎င်းသည်စက်ဘီးကိုဘယ်သူမှမခိုးနိုင်အောင်ဒါကလုံခြုံရေးအတွက်အထူးအရာဖြစ်တယ်။ မင်းကားရပ်နေတဲ့နေရာမှာသင်သွားဝယ်နေတာပေါ့၊ ဒါကြောင့်မှားတဲ့သော့ပဲ။ ငါကွင်းဆက်မှာအဘယ်ကြောင့်ပြောင်းလဲရသည်ကိုငါသိသည်၊ သင်မြင်သည်ကိုသင်မြင်ရပြီ။ အခုဆွဲထုတ်ပါ။ yakima, သော့ခတ်ထားသည့်နေရာသည်အခြားတစ်ဖက်၌ထိတွေ့မှုရှိသည်။ ဒီမှာတွေ့ရင်မင်းထပ်လုပ်မယ်၊ မင်းရဲ့စာမျက်နှာကိုနှိပ်မယ်။
ခင်ဗျားတို့မြင်ရဖို့လိုတယ်၊ ဒါကြောင့်အခုငါ toggle ကိုနှိပ်ပြီးချောင်နေအောင်ဖြုန်းတီးလိုက်တယ်။ ငါတို့စက်ဘီးကိုအခြားအရာကနေချွတ်လိုက်တယ်၊ အဲဒါကဒီဘက်မှာဆက်နေပြီးအဆို့ရှင်ကိုလွှတ်လိုက်ပြီးဆွဲတွန်းအားပေးတဲ့တွန်းအားပေး လွယ်ကူပါတယ်၊ နောက်ဘက်ဘီးမှာယခုလွတ်ပြီ။ စက်ဘီးမှဘီးတစ်လုံးထဲမှတစ်ခုသာကျန်တော့သည်။ ဒါကလွတ်သွားပြီဆိုတာသတိရပါ။ ၎င်းသည်အောက်သို့ကျလာမည်။ သင်ဆိုင်ကယ်ယခုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မြင်နေရပြီဆိုလျှင်သင့်လက်နှစ်ဘက်စလုံးသေချာအောင်လုပ်ပါ။ တံခါးဘောင်။ သင်၏စက်ဘီးကိုရပ်ထားသည့် voila ရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏လှေကားကိုပြသခြင်းဖြင့်သင်၏ကားမည်မျှအရပ်မြင့်မည်ကို မူတည်၍ လှေကားသည် ပို၍ လွယ်ကူသည်။ ? ? ?? သငျသညျရှေးခယျြမှုငါငါ့စည်ထဲမှာစောင့်ရှောက်သော stepladder နောက်တဖန်မကြည့်ရှုခြင်းအဘို့အကျေးဇူးတင်စကားထပ်မံပြီးပါပြီပြီးတော့သူကသူ Mike သူသည်ပြီးနောက်ငါတို့ကို loot box ကိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တစ် box ကိုရတယ်သူကသူမရဲ့အသစ် birdie box ကိုဖွင့်လို့ထင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆောင်းရာသီဘာဂါသေတ္တာများကအမြဲတမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်၊ အကြောင်းကတော့နောက်ပြန်လှည့်ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်လို့ရအောင်အရာအားလုံးအဆင်ပြေအောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ မဖွင့်ခင်မှာအဆင်ပြေအောင်ဖွင့်ပါ၊ ကင်မရာမင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားသလားဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ခဲ့တယ်။ လေးထောင့်တစ်နေရာမှာမင်းတို့ဆွယ်တာအင်္ကျီတစ်ထည်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်သလား။ ငါခန့်မှန်းထားတဲ့အပူလေးပုံတစ်ပုံ zip ကိုခန့်မှန်းထားတာပါ။ နှစ်ခုသုံးခုအဆင်ပြေတယ်ဒီမှာကြည့်နေတဲ့ပုံတွေကတကယ်ကိုကြည့်ကောင်းပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော့်လက်သီးကိုမသုံးသော်လည်းငါ ဒါကိုထုတ်ချင်တယ်။ ဒါက chase 54 ပဲ။ ငါဒီအမှတ်တံဆိပ်ကိုတကယ်ကြိုက်တယ်။ Chase 54 ကနေဘောင်းဘီတစ်ချို့ရတယ် chase 54 chase 54 ။ ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းတွေကိုအောင်မြင်စွာအနိုင်ရခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ 54 ကိုမင်းပြချင်တာက စိတ်ကူးက ၅၄ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဂေါက်သီးရိုက်တာနဲ့တူတယ် ul glow-go ? ? ?? ကြည့်ပါ၊ ဒီနံပါတ်များသည်မင်းဖြစ်သည်၊ သင်၏တင်ပါးပေါ်၌ရှိသောကြောင့်သင်၏ကျောပိုးအိတ်တွင်အ ၀ န်း (၃) ခုနှင့်တစ်ဝိုက်ရှိသကဲ့သို့ jus t birdie ကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်သည်အေ့စ်စုံတွဲများကိုအတူတူပြုခဲ့သည့်အတိုင်း DJ ဂေါက်သီးအားအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ မြောက်အကြီးမားဆုံးဂေါက်ကွင်းနှင့်အတူထုတ်ယူခဲ့သည်။ ခေါင်းဆောင်သစ်ဘုတ်အသစ်သင်အကြိုက်ဆုံးသင်ခန်းစာကိုမစစ်ဆေးပါနှင့်ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းနှင့်တီဗွီတွင်လူများပြုလုပ်သောအရာကိုကြည့်ပါ။ ၁.၁ ဘီလီယံပြProbleနာကျွန်ုပ်သည်အချက် ၁။ တီဗီအတွက်ပြProbleနာပေါင်းဘီလီယံနှင့်ဂေါက်သီးအစာကြေပွဲအတွက်ဖြစ်သည်။
Bridgestone-v33 lrx အမှုန့်သည်အနည်းငယ်ဖုန်ထူသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ Bridgestone ကိုရရှိသောအခါသေတ္တာ၏ပုံသဏ္whatာန်ကိုဂရုမစိုက်ပါ။ () ။ ကျွန်ုပ်တို့၌ကော်ဖီသောက်သူမဟုတ်ကြောင်းသင်မေ့နေသည်။ သို့သော်သင်ကပူ။ အအေးခံ။ လှပသောအရာများအနိုင်ရသည်နှင့်တူသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်းသည်အဆင်ပြေမည်ထင်သည်။ ပြဇာတ်။ de-resistance ကဲ့သို့သောသောက်ပါ K-50 phillipan Verde Box သည်သင်၏စက်ဘီးကို Park Park မှခေါက်ထွက်လိုက်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာအထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းငှက်ပျံများမကျစေခြင်းကဲ့သို့သောမောင်းနှင်မှုသည်နောက်တစ်ခါသင်၏ ဦး ထုပ်ကိုအပြည့်အဝနှိပ်လိုက်ပါ။ အထူးသဖြင့် Ciao Bella ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
သင်သည်သင်၏စက်ဘီးသို့မဟုတ်စက်ဘီးကိုကားဖြင့်သယ်ဆောင်လိုသော်လည်းသင့်တွင်အိမ်ခေါင်မိုးမပါရှိသည့်သို့တည်းမဟုတ်သင်အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်တွင်လည်းမလိုချင်ပေ။ ဤဆောင်းပါး၌စက်ဘီးတစ်စီးသို့မဟုတ်စက်ဘီးတစ်စီးကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်ပြပါလိမ့်မည်။ သင်၌သင့်တော်သည့်ကားသေးသေးလေးတစ်ခုရှိပါကသင့်အားအကြံဥာဏ်အချို့ပေးလိမ့်မည်။ စက်ဘီးသို့မဟုတ်စက်ဘီးဖြစ်စဉ်၌သင်တို့၏ကားကိုမပျက်စီးပါစေနဲ့။ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်များပိုမိုလိုပါက၊ Subscribe ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် GCN ကိုသင်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ (Booming Music) ယခုအချိန်တွင်သင်တို့အများစုသည်ယင်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသေချာစွာသိကြလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင့်တွင်မရှိသေးပါက၊ သို့မဟုတ်သင်စက်ဘီးကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေမသေချာလျှင်ဤဆောင်းပါးကကူညီလိမ့်မည်။ မင်းမှာကားကြီးကြီးတစ်စင်း၊ ဘူတာရုံလှည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဘူတာရုံလှည်းတစ်ခုလိုရှိရင်ခင်ဗျားကအမေရိကန်ဆိုရင်မင်းကမင်းပဲ။ လွယ်ပါတယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကယေဘုယျအားဖြင့်လုပ်နိုင်တာကနောက်ထိုင်ခုံတွေကိုခေါက်လိုက်ရင်စက်ဘီးတစ်လုံးလုံးကိုတွန်းအားပေးတာပဲ။ ဒါကြောင့်တစ်ခုကမင်းကိုငါလုပ်သလိုပဲစက်ဘီးကိုဘေးဘက်မှာတင်ထားဖို့လိုတယ်။ ဆိုလိုတာကဒီမှာစက်ကစက်ဘီးရဲ့အလေးချိန်ကိုမငြိမ်စေဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ ဒါကတကယ်တော့သူတို့ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဂရုတစိုက်ထဲမှာတွန်း။ ထို့အပြင်ကွင်းဆက်ကြိုးနှင့်ကွင်းဆက်များသည်ကား၏ဘေးတွင်တွယ်ကပ်မနေစေရန်သတိပြုပါ။ ထို့အပြင်စာရွက်သို့မဟုတ်ကော်ဇောဟောင်းတစ်ချောင်းသာထားရှိခြင်းသည်စက်ဘီးကိုဖုံးလွှမ်းရန်အသုံးပြုသောကြောင့်၎င်းသည်လုံခြုံမှုအတွက်အတော်လေးကောင်းပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဖုန်မှုန့်များကိုအခြားနေရာများတွင်မရောက်ရှိစေရန်ကာကွယ်ပေးသည်၊ စက်ဘီးအောက်မှာလည်းစာရွက်တစ်ခုကိုလည်းထားပါ။ ကျွန်ုပ်ကား၏နောက်ကျောတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်စာရွက်နှစ်စုံရှိသည်။ (ပျော်ရွှင်သောတူရိယာတေးဂီတ) သို့သော်သင်၏ကားထဲတွင်အခြားပစ္စည်းများသယ်ဆောင်လိုလျှင်မည်သို့ပြုမည်နည်း။
ကလေးများလား။ နောက်ထိုင်ခုံများကိုအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်သင့်ကားသည်ဤထက်ငယ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အမေရိကမှဖြစ်လျှင်သေးငယ်သောစည်သို့မဟုတ်ပင်စည်ရှိသည်။
ကောင်းပြီ၊ ငါနောက်ကျောမှာဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကိုထုတ်ထုတ်ဖို့နည်းနည်းလေးပိုလွယ်တယ်။ နောက်ဘက်ဘီးကိုထားခဲ့ရင်တော့တကယ်လို့သင့်မှာနောက်ဖက်စက်တွေအတွက်အခန်းတစ်ခန်းသာရှိပြီးကွင်းဆက်ပြုတ်ကျတာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အခုရှေ့ဘီးကိုဖယ်ဖို့၊ သင်ဒီစက်ဘီးလိုအမြန်လွှတ်ချင်ရင်အမြန်လွှတ်ခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ပြီးတော့သင်ဒီမှာ caliper ဘရိတ်ကိုလွှတ်ဖို့ကင်မရာကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးပဲ သင်ရုံလှည့်ပြီးဘရိတ်အုပ်အနည်းငယ်ကိုဖွင့်လိုက်သောကြောင့်ဘီးထွက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
ထိုအခါငါဂရုတစိုက်တ ဦး တည်းအခြမ်းဖို့ချထားအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပြီးတော့စက်ဘီးကိုခါတိုင်းလိုလျှောလိုက်ပါ။ ဤကဲ့သို့သောလက်ကိုင်ပုများကိုလှည့်ပါ၊ သို့သော်ထိပ်ပြွန်များမထိအောင်သေချာပါစေ။
ထို့ကြောင့်စက်ဘီးသို့မဟုတ်စက်ဘီး၏ပင်စည်ကိုကိုင်ထားပါ။ ပြန်စက်ဘီးကိုတင်။ ဤသို့ပြုရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာစက်ဘီးကိုအရင်နေရာတွင်ထားခဲ့သကဲ့သို့၊ ရှေ့ဘီးကိုစက်ဘီးပေါ်တွင်နေရာချခြင်းဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့်သင်စီးနင်းနေစဉ်လွယ်လွယ်ကူကူချော်ပါကစက်ဘီးပေါ်တွင်မထားပါနှင့်။ ဒါကြောင့်အပေါ်ထပ်ကိုကျော်စာရွက်တစ်ချပ်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ရုံနဲ့စက်ဘီးကို ၀ တ်ပါ။ အဲဒါကိုကာကွယ်ဖို့အဆင်ပြေမှာပါ။ အကယ်၍ သင့်တွင်ဒီဘရိတ်ကဲ့သို့သောဘရိတ်ဖြင့်စက်ဘီးတစ်စီးရှိပါကဘီးကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။
သူတို့ကများသောအားဖြင့်တစ် ဦး thru ရိုးရှိသည်။ ယခုတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤကဲ့သို့သောရိုးပေါ်တွင်လီဗာရှိသည်။ ဘီးကိုဖယ်ရှားရန်၊ သင်ကရိုးရှင်းစွာလှည့်ပြီးပြန်ဖျက်နိုင်သည်။ အမြန်လွှတ်ပေးသောဝင်ရိုး (axle zippers) ကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်။
ပြီးတော့ခင်ဗျားကအင်တင်ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်၊ အချို့သော ၀ င်ရိုးရှိ၎င်းတို့တွင်၎င်းတို့တွင်ပါ ၀ င်သောလီဗာမပါရှိပါ။ ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့် Allen ကဲ့သို့သောခလုတ်များလိုလေ့ရှိသည်။ တခါတရံမှာ6mils ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအခါသင် thru ရိုးထိုလမ်းဖယ်ရှားပစ်ရန် Allen key ကိုသို့မဟုတ် hex လိမ်ဖဲ့ခြင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ၀ င်ရိုးနှင့်သင်၏ဘီးကိုစက်ဘီးထဲပြန်သွင်းပါ။ ၎င်းအတွက်အကြောင်းပြချက်မှာပထမ ဦး စွာ၎င်းသည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာတည်ကြည်မှုအနည်းငယ်ကိုကူညီသည်။
ဒါဟာစက်ဘီးကိုအနည်းငယ်ပိုမိုအားကောင်းစေကူညီပေးသည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင့်အားရှုံးနိမ့်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ ဤအရာများသည်ဆုံးရှုံးရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရသူတို့ကိုထုတ်ပြီးကားခေါင်မိုးပေါ်တင်လိုက်ပြီးအားလပ်ရက်မှာသွားခဲ့တယ်။ ငါအဲဒီမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့မရှိခဲ့ဘူး။ ငါဟာဒီလိုအမှားမျိုးကိုကျူးလွန်မိသူတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။
ငါနဲ့မတူနဲ့ မင်းသူတို့ကိုမင်းရှုံးမယ့်နေရာတွေကိုထားပါ။ ကားတစ်စီး၏နောက်ကျောတွင်ဘရိတ်တစ်ချောင်းကိုတပ်လိုက်သည့်အခါသင်အနည်းငယ် ပို၍ ဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းကိုလေးလံသောအရာဝတ္ထုပေါ်တွင်တင်သောအခါ discor ကိုထိခြင်းကသင်စက်ဘီးကိုပြန်ထားသောအခါ rotor အနည်းငယ်ကွေးကွေးသွားစေနိုင်သည်။ ဘရိတ်စစ်ပုံးထဲ၌ rotor ကိုပွတ်တိုက်တိုင်းတော်လှန်မှုတိုင်းနှင့် cuh cuh cuh အသံဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဟုတ်ပြီ၊ ပြင်ဆင်ရတာတကယ်ကိုအဆင်မပြေဘူး၊ တစ်ခါတစ်လေမှာ rotor အသစ်တစ်ခုလိုအပ်တယ်။ အမြဲတမ်း၎င်းကိုလှည့်ပတ်စက်ဖြင့်ထားပါ၊ ၎င်းကိုအရာဝတ္ထု၏အပေါ်တွင်မထားပါနှင့်။ သင်ဟိုက်ဒရောလစ် disc ဘရိတ်ကိုအသုံးပြုနေသည့်အခြားအချက်တစ်ခုမှာသင်သည် impeller ကိုထုတ်ယူသောအခါ caliper ထဲ၌တစ်ခုခုထည့်သွင်းပါကပစ္စတင်များကိုတွန်းထုတ်ပြီး pads တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားပိတ်ဆို့နိုင်သည်။
သင်က၎င်းကိုပြန်ဖွင့်ရန်အတင်းအကျပ်ပြုနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်နည်းနည်းခက်ခဲစေသည်။ သင်ဝယ်ယူနိုင်သောအထူးပလတ်စတစ်ပလပ်စတစ်များကိုအထူးပလပ်စတစ်အပိုင်းအစတစ်ခုထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကသင့်တွင်ထိုအရာများမရှိလျှင်ခေါက်ထားသည့်စီးပွားရေးကဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ အချို့သောစက်ဘီးအဟောင်းများကိုဘီးများတပ်ဆင်ထားသည်။
ယခုသင်သည်ဤအရာများကိုဖယ်ရှားရန်လိမ်ဖဲ့ခြင်းနှစ်မျိုးလိုအပ်သည်၊ သို့သော်ကံကောင်းထောက်မစွာသူတို့သည်ယနေ့ခေတ်တွင်သိပ်မများလှပါ။ ဒီဟာလေးနည်းနည်းလေးပဲရှိပေမယ့်ဘီးကိုဖယ်ရှားပေးရတာအရမ်းကောင်းပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်တွင်နေရာနည်းပါးလွန်းပါကစက်ဘီးစီးရန်အတွက်ဘီးနှစ်ခုလုံးကိုသင်ဖယ်ရှားရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒါကပြaနာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ထိုင်ခုံတွေချပြီးဘီးနှစ်ခုစလုံးကိုစက်ဘီးကနေဖယ်လိုက်တာ၊ စက်ဘီးစီးနိုင်တဲ့ကားဘယ်လောက်များများလဲဆိုတာကိုသင်အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာက Renault Clios, Fiat 500, Porsche Caymans ။
သင်တကယ်လိုချင်သည့်အချိန်တွင်စက်ဘီးမစီးနိုင်သည့်ကားအနည်းငယ်သာရှိသည်။ အကယ်၍ သင်ဘီးနှစ်ခုလုံးကိုထုတ်ယူချင်လျှင်၊ လုပ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာစက်ဘီးကိုဇောက်ထိုးလှည့်ရန်ဖြစ်သည်။ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဝါဒီများက၎င်းကိုလုပ်ရန်ကြံစည်ခြင်းကိုမုန်းတီးခြင်းဟုယူဆပြီး၎င်းကိုမလုပ်မိရန်သင်အားပြောလိမ့်မည်။
ဒါပေမဲ့သူတို့ကမှားကြတယ်။ စာရွက်တစ်ရွက်ကိုချရုံဖြင့်သင်၏စက်ဘီးကိုမထိခိုက်စေဘဲကောင်းမွန်။ သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။ နောက်ခံဘီးကိုဖယ်ရှားရန်နောက်ဘီးကိုနောက်ဘက်ရှိအသေးငယ်ဆုံးဂီယာထဲသို့သွင်းလိုက်လျှင်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သည်။
အမြန်ဖြန့်ချိသောလီဗာသို့မဟုတ်အမြန်လွှတ်လွှတ်မှု ၀ င်ရိုးကိုဖြေလျှော့။ နောက် derailleur ကိုနောက်သို့နှင့်အထက်သို့ဆွဲ တင်၍ ဘီးပြုတ်ပါစေ။ သင်၏ Destination Plus သို့ရောက်ရှိခြင်းသည်စက်ဘီးနှစ်ဘီးကိုဇောက်ထိုးဖြစ်သည့်တိုင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မံလုပ်ဆောင်ပါ၊ သို့သော်အပြန်အလှန်အားဖြင့်စက်ဘီးကိုစက်ဘီးထဲပြန်ထည့်ရန် ပို၍ လွယ်ကူပါသည်။ သငျသညျအားလပ်ရက်သွားနေလျှင်သို့မဟုတ်သင်၏ခရီးဆောင်အိတ်များအားလုံးသင့်စက်ဘီးနောက်ကျောတွင်တင်ရုံသာဖွစ်မည်ဆိုပါက၎င်းကိုပထမနေရာတွင်ထည့်ရန်နှင့်အထူးသဖြင့်လေးလံသောပစ္စည်းများကိုထိပ်တွင်ထားရန်အကြံပြုလိမ့်မည်။
၎င်းကို disc brake rotor နှင့်နောက် mech ဆွဲကြိုးပေါ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးထားပါ။ ယခင်ကကဲ့သို့စာရွက်များ၊ ကော်ဇောများ၊ ပူဖောင်းထုပ်ခြင်းများကိုအသုံးပြုပြီးသင်ဖုံးအုပ်ထားသည့်စက်ဘီးကိုကာကွယ်လိုပါကကွင်းဆက်မှမောင်းနှင်မှုလမ်းကြောင်းကိုဖုံးအုပ်ထားခြင်းသည်လည်းကောင်းသည်။ အကယ်၍ သင်လိုချင်သည့်အခါဆီနှင့်ဖုန်သည်သင်၏အခြားပစ္စည်းများအပေါ်သို့ရောက်သွားလိမ့်မည်။ ကားတစ်စီး၏နောက်ကျောတွင်စက်ဘီးတစ်စီးထက် ပို၍ ထုပ်ပိုးလိုလျှင်၊ ဘောင်ခတ်တစ်ခုစီအပေါ်တွင်ထားရန်အဆင်ပြေသည်။ padding တွေအများကြီးကိုသုံးပြီးသူတို့မပျက်စီးသင့်ဘူးသူတို့ဟာပေါ့ပါးတယ်။
အကယ်၍ သင်ဟာတကယ်ကိုအဆင်မပြေတဲ့ကားတစ်စီးရှိတယ်ဆိုရင်ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ထိုင်ခုံ၊ ခြေနင်းတွေလိုအပိုပစ္စည်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့လိုပြီးတစ်ခါတစ်ရံမှာပင်လှည့်လည်တာတောင်မှတောင်လှည့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆောင်းပါးကအသုံးဝင်သည်။ အကယ်၍များ အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ကျေးဇူးပြုပြီးလက်မလွှတ်လိုက်ပါနှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေပါ။ ပြီးတော့စက်ဘီးစီးခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များပိုမိုကြည့်ရှုရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။
ပြီးတော့ကားနောက်ခန်းမှာစက်ဘီးတစ်စီး ၀ ယ်နေတဲ့အချိန်မှာအကြံဥာဏ်တွေ၊ အကြံဥာဏ်တွေ၊ hacks တွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်များအပိုင်းမှာသိပါစေ။
စဉ်တွင်ခေါင်မိုးထိန်သိမ်းသူတို့ရဲ့ဘက်စုံသုံးမှုအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူမှုအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။ ကထိန်သိမ်းထိန်သိမ်းအခြားတစ်ဖက်တွင်ကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသည်။ သင့်ထံမှတစ်ခုခုလိုအပ်ပါကထိန်သိမ်းထိန်သိမ်းလမ်းပေါ်မှာရှိနေချိန်မှာမင်းကခုန်ထွက်လိုက်ရုံပဲရပါတယ်က။ ဒါဟာဝေးလျော့နည်းရန်ခက်ခဲသည်တစ် ဦး ချထိန်သိမ်းထိန်သိမ်း။
(Crash) - GMBN ကိုမေးမြန်းရန်ကြိုဆိုပါသည်။ ယခုအပတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာမေးခွန်းများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ငါ့ကိုကူညီရန်ကျွန်ုပ်သည် Dod, tech ကောင်လေးရှိသည်။ ဒီ Doddy အတွက်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သေချာပါတယ်။ တချို့ကျွမ်းကျင်မှုတွေလည်းနည်းနည်းနည်းနည်းတော့ဒီအပတ်မှာနည်းနည်းပဲကွာတာပေါ့။ Fine.- Joe O'Carroll ကနေစကြရအောင်။ Doddy ကမင်းကိုတကယ်ပဲရည်ရွယ်တယ်။ ရေမြှုပ်ဖြင့်သင်အသုံးပြုသောရောင်စုံကွင်းဆက်ချောဆီသို့မဟုတ်ဖယောင်း၏ 'ငါဒီဆောင်းပါးတွေကို Instagram ထဲမှာဆက်ကြည့်နေတယ်။ ' 'မင်းသူတို့ကိုတွေ့ပြီလား' - ငါ့မှာရှိတယ်။
ဤ GCN ယောက်ျားများအားလုံးသည်ထိုအရာများကိုနှစ်သက်ကြသည်။ သူတို့ကြိုက်သလား။ - ဟုတ်ကဲ့၊ ဟစ်တလာရဲ့ပုံစံပဲ။ မင်းကသက်တံရောင်ရောင်လည်ဆွဲနဲ့တူတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ မင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ - ငါမသိဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖယောင်းချည်နှောင်မှုဟာပွတ်တိုက်အားကင်းစင်ပြီးပူးတွဲချိတ်ဆက်ထားတာကြောင့်ဒါဟာသင်စီးတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်စီးနင်းရတဲ့အခြေအနေတွေ၊ စီးနင်းမှုရဲ့အဆုံးမှာအမြဲတမ်းညစ်ပတ်နေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဒီကအနက်ရောင်ဖြစ်သွားသည်, ထင်သလား သငျသညျရွှံ့ထဲသို့တစျစီးသို့မဟုတျ drive တစျစုံတစျစီးကိုတစျခြိနျထှကျလာသောအခါသငျသညျမှေးမှိန်လာသညျ။ ဒါဟာတော်တော်လေးလှည်ကြည့်ရှုသည်။ - ဟုတ်တယ်၊ - ငါကအေးဆေးလိမ့်မယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကဒီအရာအချို့ကိုကြိုးစားကြည့်ရတာနှစ်သက်တယ် - စုံစမ်းသည်။ - ဂျူရီထွက်သွားပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ချောဆီချောမွေ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်စိတ်ထိခိုက်သည်။
ငါတစ်နှစ်ပတ်လုံးခြောက်သွေ့တဲ့ချောဆီကိုကြိုက်တယ် ငါစိုစွတ်သောချောဆီကိုမကြိုက်ဘူး တကယ်တော့ငါလည်းအတူတူပဲ။
စိုစွတ်သောငါထင်လွန်းစေးကပ်ရရှိသွားတဲ့။ - ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုကြည့်ချင်သည်။ ဟုတ်ကဲ့ - Right Aiden ARW၊ 'Hi Doddy, သင်လျောက်ပတ်သောစက်ဘီးထိန်သိမ်းရန်အကြံပေးနိုင်သလား' VW station wagon အတွက်။ 'ငါ့ကားနောက်မှာရွှံ့စေးနေတဲ့စက်ဘီး' ။ ဟုတ်တယ်၊ မင်းရဲ့နာကျင်မှုကိုငါခံစားရတယ်။
ကောင်းပြီ၊ မင်းမှာမင်းရဲ့အိမ်ခေါင်မိုးတစ်ခုရှိလား။ - ဟုတ်ကဲ့၊ ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ငါ့မှာဒီ Thule ခေါင်မိုးအကာအရံတွေ၊ ခေါင်မိုးထိန်တွေနဲ့စက်ဘီးစင်တွေရှိတယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ပြproblemနာကမင်းရဲ့ကားအတွင်းပိုင်းကိုညစ်ပတ်အောင်လုပ်မယ့်အစား၊ အခုသင်ကားခေါင်မိုးနဲ့နောက်ကားကိုညစ်ပတ်နေပြီ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပါရန်နိုယာတစ်ယောက်အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ကနေမင်းရဲ့ပြyoursနာတွေတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။ ငါပြတင်းပေါက်ကနေမြင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်။ စက်ဘီးစီးတာကိုဒီအနိမ့်အနိမ့်အမြင့်တွေနဲ့စီးလိုက်တဲ့လူတွေကိုငါသိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအရမ်းကိုတွယ်ကပ်နေလို့စက်ဘီးကိုအလွယ်တကူချိုးဖျက်နိုင်ပြီးကားရဲ့ထိပ်ကိုလည်းဆုတ်ဖြဲပစ်လိုက်လို့ပါ။ ဒါနဲ့ငါအရမ်းအထိခိုက်မခံဖြစ်၏
ကောင်းတယ်ထင်တယ် မင်းရဲ့စက်ဘီးကိုပြန်မတင်ခင်မှာသင့်စက်ဘီးကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်သင့်တယ်ထင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကမင်းရဲ့အောက်ပြွန်ကိုကုတ်ခြစ်လို့ရတယ်။ - ဒါကောင်းတဲ့နာမည်ကောင်းပဲ။ - ဒါပေမယ့်ငါကြိုက်တယ်။
အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ် အဲဒီမှာအမြဲတမ်းရှိနေတယ် - Thule ရဲ့နောက်ကျောကိုမင်းတို့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ကြီးကျယ်တဲ့ထိန်တွေအများကြီးလုပ်တယ်လို့ငါထင်တယ်။
Saris ဟာတကယ့်ကိုအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်သူပါ။ ငါကဘာတစ်ခုမှအတည်ငြိမ်ဆုံးလဲ - ဘားကောင်တာတစ်ခုကိုသွားမယ်လို့ပြောမယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါဆွဲဆွဲဘားကိုမလိုချင်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြုတ်လို့ရတဲ့ towbar တစ်ခုရဖို့လိုတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ အဲ့ဒီမှာသူတို့ကိုငါမကြိုက်ဘူး။ မင်းမှာကားမှန်မရှိရင်သူတို့ကနည်းနည်းပဲကြည့်တယ်။ - ဟုတ်တယ်။ - ဤစက်ဘီးထိန်သိမ်းသည့်နေရာများ၊ သင်ကကျွန်ုပ်တို့၌စက်ဘီးတစ်စီးသို့မဟုတ်မည်သည့်အရာကိုမဆိုကောက်ယူနေသည်မှာကျွန်ုပ်မသေချာစေရန်၊ ၎င်းတို့ကိုပူးတွဲ။ ဖြုတ်ထားရန်လိုသည်၊ ၎င်းကိုကားထဲတွင်ဖွင့်ပါ။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်အိမ်ခေါင်မိုးကအမြဲတမ်းဖွင့်ထားတယ်။ - ဟုတ်တယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းကလောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကိုလုံး ၀ ထိခိုက်စေတယ်လို့မင်းထင်လား။ - ဒါကတကယ်လုပ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါကခေါင်မိုးပေါ်မှာလုပ်တယ် - ခရီးဆောင်အိတ်တွေအတူတူပဲဆိုရင်ကော။ - ဒါကနည်းနည်းပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ သီအိုရီအရပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့မင်းထင်တယ်မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့်အင်း၊ ကျွန်တော်ကဆွဲထားတဲ့စင်ပေါ်မှာလုပ်ပြီး Thule ကတောင်ကြီးအတွက်စက်ဘီးကိုလုပ်တယ်။
သူတို့မှာဘီးတွေပိုရှည်ပြီးအဆီစက်ဘီးတွေကိုလည်းကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကကုန်းဆင်းစက်ဘီးတွေမှာတော်တော်လေးခိုင်မာသွားမှာပါ။ စင်ပေါ်အမျိုးအစားအတွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကြည့်ပါ။ အိုက်စလန်တွင်သူ၏ Land Rover ရှိကောင်လေးသည်ဤထိန်ထိန်ထားခြင်းဖြစ်သည်၊ မည်သူမည်သူပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ သူကသူတို့ကိုတာယာတွေ၊ ဘီးတွေပေါ်မှာချည်ထားတယ်၊ ဒါကြောင့်တာယာ မှလွဲ၍ စက်ဘီးနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိဘူး။
ဒါကတကယ်ကိုကောင်းပါတယ် ငါထုတ်လုပ်သူကိုငါသိတယ်။ ငါမကြောက်ဘူး - ကနေဒါမှာဖြောင့်မတ်တဲ့တာယာတွေရှိတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်၊ မင်းတို့အားလုံးတည်ဆောက်ထားတာကိုမတွေ့ရဘူး၊ သူတို့ဟာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမယ့်ငါသူတို့ကိုမင်းဒီကိုယူလာမယ်မသေချာဘူး။ သူတို့ကိုကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်မတွေ့ခဲ့ပါ၊ သို့သော်သူတို့တော်တော်လေးကောင်းမှာပါ။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်အချက်အလက်များစစ်ဆေးရန်အချိန်အတိအကျကျွန်ုပ်အိုက်စလန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်မဂ်နာအကြောင်းပြောသောစက်ဘီးထရပ်ကားတွင်သူ၏ Land Rover အမှတ်တံဆိပ်တွင်ရှိသည်။ 1Up ၏။
ဒါကအမေရိကန်အမှတ်တံဆိပ်ပါ။ ဒါကြောင့်စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ Jon Bishop မှနောက်ထပ်တစ်ခု။ သူ၌ရန်လိုသောလမ်းကြောင်း (သို့) ကုန်းမြင့်တက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးတာယာဖိအား (2018 Cube Reaction Hardtail 29er) ရှိသည်။ တူးမြောင်းကိုလုံး ၀ စွဲလမ်းနေတယ်။ Jon Jonas ။ ။ ဒါကမင်းဟာယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့၊ သင်မှာရှိတဲ့တာယာတွေနဲ့စီးနင်းနေတဲ့နေရာအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။
မည်သူမဆိုတူညီသောဖိအားရှိသည်ဟုမထင်ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါရန်လိုလမ်းကြောင်းများနှင့်ကုန်းကြောင်းစီးနင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ 29er hardtail အပေါ်ခဲ့လျှင်သူတို့ကိုငါတော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့ချင်လိမ့်မယ်, ငါ့ကိုပြောလိမ့်မယ် ၂၈၊ ၃၀ လား။ လူတိုင်းကိုကိုက်ညီမှုမရှိပါ
ဒါကသင်၏တာယာဘယ်လောက်အထိချိုင့်သွားတယ်ဆိုတာပေါ်မူတည်တယ်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောသွယ်တန်းလှသောကုန်းတွင်းတာယာတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုပါက၎င်းသည်အတော်လေးခက်ခဲလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေပါးနပ်။ နူးညံ့သည့်တာယာတွင်သင်မပါ ၀ င်ပါက - ဟုတ်ကဲ့ - သင်မည်သည့်ဖိအားကိုပုံမှန်စီးလေ့ရှိသနည်း - ငါနှစ်ဆယ်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဝန်းကျင်၌ကိုယ်အလေးချိန်ကျခဲ့ပြီလား။ , 24 မှ ​​28, သို့သော် enduro ပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ်တနင်္ဂနွေအနည်းငယ်မတိုင်မီ။ ငါ psi (၂၈) (သို့) 30 psi ဆီပြန်သွားခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအရမ်းခဲနေလို့သင်ပင်ပန်းနေတယ်။
သင်ပြိုင်ပြေးသည့်အခါ၎င်းသည်မတူကွဲပြားသောမောင်းနှင်မှုပုံစံဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ရှေ့တွင် ၂၄ နှစ်၊ နောက်ဖက်တွင် ၂၈ ယောက်ရှိသည်။ ဟုတ်ပါသည်၊ သေချာသည်မှာနိမ့်သည်။ သို့သော်ဟုတ်ပါသည်၊ သင်စမ်းကြည့်။ သင့်အတွက်မည်သည့်အရာကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုရှာရန်ရိုးရိုးသားသားပြောပါ၊ တာယာဖိအား၏အကြောင်းအရင်း၊ ထို့ကြောင့်စစ်ဆေးပါ၊ သင်၏တာယာများပေါ်တွင်သင်ထားသည့်စက်ဘီးအမျိုးအစား၊ သင်၌တာယာအမျိုးအစား၊ သင်မောင်းနှင်နေသည့်အခြေအနေများစသည့်သင်၏တာယာဖိအားများကိုမည်သို့မည်ပုံသက်ရောက်စေမည့်အရာအနည်းငယ်ရှိသည်။ သင်၏တာယာများသည်သင်၏တာယာများမည်မျှခက်ခဲသည်ကိုဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ Ginzex၊ 'ဟေး၊ ငါအကြောင်းအရာကိုကြိုက်တယ်' 'စက်ဘီးရဲ့ frame အရွယ်အစားကိုပြောင်းလိုက်ပြီလားငါစဉ်းစားနေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်' သင်ကကြီးလာရင်ပိုကြီးတဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့စက်ဘီးကိုပြောင်းလဲဖို့လို 'လား။ - ဟုတ်ကဲ့၊ ရှေ့တွင်စက်ဘီးဘောင်ဘယ်လောက်ကြာမလဲပေါ် မူတည်၍ သင်၏လမ်းဆုံလမ်းခွအတွက်စတီယာရင်ပြွန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ငါထင်တဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏လျော့နည်းသည်။ သင်၏ထိုင်ခုံပြွန်အချင်းသည်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ထိုင်ခုံအသစ်တစ်ခု၊ အောက်ခြေခုံးနှင့်နောက်ဘီးတစ်ခုသို့မဟုတ်ပိုကြီးမားသောဘောင်များသို့ ၀ င်နိုင်သည့်တိုင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်သည်။ ဦး ခေါင်းပြွန်ကမင်းကိုဖမ်းဆီးနိုင်မလား၊ ဟုတ်တယ်၊ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ထိုင်ခုံအရှည်လား။ - ဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်အချင်း။
သင်ကံကောင်းခြင်းနှင့်အတူတူပါပဲလုပ်နိုင်သည်။ သင်၏ပမာဏမည်မျှရှိသည်ကိုသိရှိရန်အသစ်ကိုဆန့်ကျင်သည့်သတ်မှတ်ချက်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်အမှန်တကယ်လိုချင်လျှင်သင်လည်းဤသတ်မှတ်ချက်များကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ -Regan Doig 'ဟေ့ကောင်တွေ၊ ငါ့မှာအချိတ်အဆက်တစ်ခုထဲမှာအဓိက link တစ်ခုထက်ပိုပြီးရနိုင်မလား' ' ဒါကြောင့်ကွဲပြားခြားနားလင့်ခ်။ - တရားဝင်လိုင်းကဘာလဲဆိုတာငါမသိဘူး။
ခင်ဗျားပြောတာမှန်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ဘာမှမမှားပါ ကွင်းဆက်ထဲမှာအနိမ့်ဆုံးချိတ်ဆက်မှုကမင်းရဲ့ပြisနာဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်။ စနစ်တကျချိတ်ဆက်ထားရင် split link ကချိတ်ဆက်လို့မရတော့ဘူး။
ငါချိုးဖောက်ခဲ့သည့်နောက်ဆုံးသောကာလကိုမအောက်မေ့နိုင်ပါ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့အဲဒါကို split link ကနေမရခဲ့ပါဘူး။ တခြားနေရာကမဟုတ်ပါ၊ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလေးလံတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အချိန်မတန်တော့တဲ့အချိန်မှာပဲရောင်းပြီးအဲဒါကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုရယူနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကူး။
အဘယ်ကြောင့် split link များမှကွင်းဆက်တစ်ခုမဆောက်ရသနည်း။ - အလို။ Enduro World Series မှာလူတစ်ယောက်ဟာစင်မြင့်အလယ်မှာသူ့ကွင်းဆက်ကိုဖောက်ဖျက်ပြီးရပ်တန့်မသွားအောင်လုပ်ခဲ့လို့ပါ။ မြေပြင်ကိုထိပြီးငါဘာလုပ်သင့်လဲ လုပ်ရန်? ဒါဟာဘယ်နေရာမှာအလယ်၌ရှိ၏။
တစ်ယောက်ယောက်မှာကွင်းဆက်ရှိသလားလို့သူမေးတယ်။ ငါ no နဲ့တူတယ်, ငါခွဲနေလင့်ခ်ရှိသည်။ အခြားတစ်ယောက်ယောက်ကငါခွဲနေတဲ့ link ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။
အပိုင်းအစလေးတွေကိုအလယ်ကိုယူလာပေးရမယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့အလုပ်မလုပ်သင့်တာလဲငါနားမလည်ဘူး ငါကကွင်းဆက်အချို့သော flex တစ်ခုမျိုးကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်ကဲ့သို့ကြာရှည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါထင်သူကသူတို့ရှိသည် flex ၏ပမာဏအတွက်ကန့်သတ်လိမ့်မည် - ကစျေးကြီးလိမ့်မည်။ - အရမ်းစျေးကြီးတယ်
ဒါပေမယ့်ငါကအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ် သင်၏ချည်နှောင်ခြင်းကိုခွဲပြီးတိုင်းပြန်ထားသည့်အခါတိုင်းနှစ်ခါစစ်ဆေးပါ။ - မင်းရဲ့ကျိုးပဲ့နေသောသံကြိုးကိုကျိုးပဲ့တဲ့အခါငါမင်းဘယ်တော့မှမယုံဘူး (အီလက်ထရောနစ်ဂီတ) - ပါဝါချိတ်ဆက် (သို့) ချိတ်တွဲလင့်ခ်ကို သုံး၍ သင်၏ကြိုးကွင်းကို Trail ၏ဘေးဘက်ချိတ်ဆက်ရန်နောက်တစ်နည်းဖြစ်သည်။
ဒါတွေဟာတောက်ပနေပါတယ် ၎င်းတို့သည်လူကြိုက်များလာသည်နှင့်ချည်နှောင်ခြင်းများစွာနှင့်ကောင်းစွာသဟဇာတဖြစ်သဖြင့်သင်၏မောင်းနှင်မှုနှင့်ကိုက်ညီသောတစ်ခုရှိရန်သေချာစေပါ။ အိုကေ၊ နောက်တစ်စီးမှာ Damanik Alfiano မှဖြစ်သည်။ 'အံကြိတ်အနားကွပ်နဲ့စီးရတာလုံခြုံပါသလား' - ငါအချိန်အများစုကိုဟုတ်ကဲ့ပြောလိမ့်မယ်။
မကြာသေးမီကတာယာ၏ပုတီးစေ့ကိုသင်အမှန်တကယ်မြင်နိုင်သည့်နေရာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်မကြာသေးမီကလည်ခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်သည်ငြင်းဆန်နိုင်သည်၊ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်အညှိပေးနိုင်သောအဟောင်းဖောင်းပွမှုကိုထုတ်လိုက်ပြီ၊ ပြီးသွားခဲ့သည်။ အဆင်ပြေသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင် tubeless run သောအခါသင်သတိထားမိစေခြင်းငှါအရာတစ်ခုမှာသင်တံဆိပ်ခတ်ကိုချိုးဖျက်နိုင်။
ဒါကိုပြန်ဖော်ရန်မခက်ဘူး၊ ဒါကငါ့ရဲ့ပြproblemနာဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါကနောက်ကိုငုံ့လိုက်ပြီးအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ဆက်လုပ်ပါ လာမယ့် CJ Trumpet ကနေဒါကောင်းသော။ မင်းရဲ့စက်ဘီးကိုဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မလဲ ' လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းအပတ်စဉ်ဘရိတ်ပြproblemsနာများအပြင်အခြားပြproblemsနာများလည်းရှိသည်။
သင်တို့မူကားဤစက်ဘီးကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဘရိတ်များသည်အလုပ်နှင့်မကိုက်ညီပါက၎င်းတို့သည်သေးငယ်သော rotor တစ်ခုပေါ်သို့ဆင်းပြီးပူလွန်းနိုင်သည်။ - ကျွန်ုပ်သည်စက်ဘီးသည်သင့်ကိုယာဉ်မောင်းတစ် ဦး အနေနှင့်မှီရန်စိတ်သဘောထားရှိသည်ဟုထင်သည်။
သငျသညျယခုသင်လုပ်နိုင်သည်နိုင်စွမ်းရှိပါသလား, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းအစအဆင့်မှာ? သင်၏စက်ဘီးကိုမစီးနိုင်အောင်သင်၏စွမ်းရည်သည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်သည်။ - ဟုတ်ကဲ့၊ ငါပြောခဲ့သလိုပဲတာယာ၊ ဘရိတ်နဲ့အခြားအရာတွေကိုအဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီစက်ဘီးကိုသင့်အဆင့်အထိပိုတက်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်သင်တို့ပိုမိုကြီးမားသော rotors များရရှိခြင်းဖြင့်သင်၏ breaking power တိုးတက်စေရန် hacks အနည်းငယ်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်တူညီသောဘရိတ်ကိုသုံးပါကစွမ်းအင်ပိုမိုများပြားလာပါကဘရိတ်နှင့်ပတ်သက်သောပြwhatနာမှာ - ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါသည်။ နောက်တစ်ခုက Juan Salce မှဖြစ်သည်။ 'မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ ကျွန်ုပ်ရွေးချယ်မှုမှာပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားနေသည်' 'ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်နေသည့်ကျွန်ုပ်၏မရှိခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုထင်မြင်သည်။ 'ဘယ်လမ်းကြောင်းမှာမဆိုမရပ်တန့်ဘဲလေ့ကျင့်ရေးလိုင်းရွေးချယ်မှုကိုလှည့်ပတ်သွားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲ' 'ငါဆိုလိုတာကပိုပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝတယ်။ ငါကအမှုအရာရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ထပ်ခါထပ်ခါကြိုးစားနေအကြောင်းကိုအကြိမ်စုံတွဲပြောခဲ့တယ်။
ငါလူငယ်တစ် ဦး ဖြစ်တဲ့အခါဒါဟာငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျတူညီသောအပိုင်းအစစီးနိုင်အောင်, ငါအမြဲတက်နှင့်နောက်တဖန်လမ်းကြောင်းတက်။ လူတိုင်းအတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး
သင်သည်အခြားလူများနှင့်အတူစီးနင်းနေပြီးသင်ရပ်တန့ ်၍ မသွားလိုပါ။ ဒီတော့ဒါကအနည်းငယ်ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုချိတ်ဆက်ဖို့အာရုံစိုက်တာပါ။ ငါလုံလုံလောက်လောက်ကားမောင်းတဲ့အခါငါဒီမှာမျက်စိကျပြီးသူတို့အဲဒီမှာတက်ဖြစ်ဖို့တကယ်တော့အမြဲတမ်းစဉ်းစားတွေးခေါ်သည့်နေရာတွင်ကျိန်းသေဖြစ်ပျက်သည်။
အရာအားလုံးကိုထောင့်တွေလိုစည်းထားဖို့ကြိုးစားပါ၊ ဒါကစမ်းသပ်မှုနဲ့အမှားပဲ။ ကွဲပြားခြားနားသောလိုင်းများကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကြိုးစားပါ။ ပိုကောင်းတဲ့မျဉ်းကြောင်းရွေးချယ်တာကသင့်ဗီဇပိုကောင်းလာမယ်။ ငါထင်တယ် - စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက Greg Minnaar ရဲ့နောက်မှာကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ POV ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။
ဒီကောင်လေးက Greg လောက်မကောင်းဘူး။ Greg မျက်မမြင်ကားမောင်း, ဒါပေမယ့်ကောင်လေးသူပုံမှန်သူစီးအဖြစ်နှစ်ကြိမ်မြန်မြန်မောင်း, Greg နောက်တော်သို့လိုက်နှင့် Greg မျက်စိကန်းသောတောင်တက်ခြင်းနှင့်အားလုံး၏ရှေ့ဘယ်လိုရတယ် - နှင့်ဤကုန်းဆင်းတကယ်သူတို့ကိုယ်သူတို့အာရုံစိုက်ဤမျှလောက်အချိန်ဖြုန်းခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကဒါကောင်းကောင်းဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒါကိုတစ်ချိန်လုံးတွေးနေတယ်။ - ယခုတွင်လျင်မြန်စွာမီးလောင်ရန်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်ရာအမှန်တကယ်ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းသည်သင်၏ EWC ပြိုင်ပွဲအတွက်ရည်ရွယ်သောအရာအားလုံးဖြစ်သည်။ - အေးမြ။ - ဒါကြောင့် Aintberry မှ 'မင်းနောက်ကျောကာကွယ်ပေးမယ့်သူ' 'ကိုစတင်ခဲ့သည်။ '' ငါတ ဦး တည်းရဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြရတယ်။ '- ငါသူတို့ကိုပြေးရတာမပျော်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်တကယ်ကောင်းတယ်
ငါချက်ချင်းမေ့လျော့ ပြီးတော့ငါလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့ကျဆုံးခြင်းကကျောက်တုံးပေါ်မှာငါးပေလောက်အကုန်လုံးကျသွားနိုင်တယ်၊ ငါ့တံတောင်ဆစ်ကအခုထိနာနေတုန်းပဲ။ - မင်းနောက်ကျောကအဆင်ပြေရဲ့လား။ - နောက်ကျောကလုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်။ - Brian Holm၊ 'လမ်းလျှောက်ရင်းခြေနင်းချပ်နေသောလမ်းလျှောက်ခြင်းအတွက်သင်နောင်တရပါသလော' သို့မဟုတ် 'နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ရန်အတွက်ရွေးချယ်မှုသည်မှန်ကန်နေဆဲလော' - ငါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရထင်မြင်ချက်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်အစိတ်အပိုင်းအချို့နှင့်အနည်းငယ်နက်ရှိုင်းသောကြောင့်နက်ရှိုင်းသောဖုန်မှုန့်ပြောင်းလဲလဲများများကြောင့်ကျွန်ုပ်ခြေကိုချွတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ငါ့အတွက်မှန်ကန်ခဲ့သည်။ - Mark Kasaboski၊ ၁:၂၄ မှာမင်းရဲ့ဖိနပ်ရဲ့အောက်ခြေကိုတွေ့နိုင်တယ်။ 'ဖိနပ်' ပြီးတော့မင်းကဖိနပ်စီးတယ်။ ' 'ဘာလဲကွာ?' 'သူတို့ကအဲဒီလိုဖြစ်သင့်သလား' - ဒါကြောင့် Northwaves အသစ်ကသူတို့ကိုဘာခေါ်သလဲ - မျိုးနွယ်စုများ။ - မျိုးနွယ်စုများ။
သင့်ရဲ့ခြေနင်းကိုတင်ပေးမယ့်နေရာမှာသူတို့မှာနိမ့်ကျတဲ့အနေအထားရှိတယ်။ အယူအဆကတော့နေရာတစ်ခုမှာကပ်နေမယ့်အစား၊ ငါတကယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပုံကိုကောင်းစွာအံ့သြမိသည်။
ကျနော်တို့ငါးဆယ် Freerider တူသောအရာနှင့်အတူမတိုင်မီမြင်ဘူးပါတယ်။ အဆက်အသွယ်တွေကိုသူတို့ခေါ်ခဲ့တာလဲ - ဟုတ်ကဲ့၊ အဆက်အသွယ်မှန်။ - ငါသူမကိုရိုးသားဖို့မကြိုက်ဘူး။ - သူတို့တွေအရမ်းလန်းလန်းလန်းဆန်းတယ်။ - ငါတကယ်သတိထားမိကြဘူး
သင်ခြေနင်းကိုနင်းမိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပုံမှန်ဖိနပ်များနှင့်မတူပါ။ ဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ ငါကောင်းတယ်လို့ထင်တယ် - နောက်ဆုံးတွင် Noah Carder မှ 'စက်ဘီးပိုလိုကစားဖူးလား' ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ 'မင်းမရှိဘူး။ '- ဘယ်တော့မှမ
ဒီဟာကစက်ဘီးဘောလုံးကိုငါမြင်ဖူးလား - စက်ဘီးပိုလို --- ခင်ဗျားကိုတုတ်ကိုင်လိုက်ပြီးရိုက်တယ်။ ဒါကစက်ဘီးကစားပုံလိုလိုထင်တယ်။ ငါတို့ကြိုးစားသင့်သည်မဟုတ်လော - ဤထင်မြင်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ သင်ထင်သင့်သည်အတိုင်းကြိုးစားပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်မသေချာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်အမှားမှားမိရင်ငါ့ကိုဆုံးမပါ။ ဒါကြောင့် Tim o သူရဲ့ Mondraker Dune Carbon Rand မှာသူလုပ်နေတာလားမေးတယ်။
ဒါကြောင့်သူကဒီနှစ်ဆခုန်။ သူလဲကျတဲ့အတွက်သူချက်ချင်းမရလိုက်တဲ့နောက်တစ်ကွည့်ကိုကြည့်ပါ ဦး ။ ဒါဟာပြားချပ်ချပ်ရှည်လျားသောနှစ်ဆဖြစ်သည်။
မင်းကလေထဲကိုမကျဘူး၊ မင်းဖြတ်သန်းသွားပြီလေ၊ ပြီးတော့မင်းဆင်းလိုက်တာလေ၊ ဒါဆိုငါကအဲဒါကိုနည်းနည်းနှေးနှေးသွားမယ်လို့ပြောချင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေသည့်ဒီယုန်ခုန်နည်းပညာကိုသုံးပါ။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အမြင့်အောင်ကြိုးစားပါ။
ဤသည်ခုန်နိုင်ခြင်းသည်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်မည်မဟုတ်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်တိမ်သောခုန်ခြင်းကြောင့်ပိုမိုတိုတောင်းသောပိုမိုကြီးမားသောခုန်ခြင်းကိုတွေ့နိုင်လိမ့်မည်။ ကောင်းသောအသံဟုပြောလိမ့်မည်။ လွယ်ကူပါတယ်။ နောက်ဆုံးမိနစ်မှာသူမလုပ်ချင်သလိုပဲ၊ ငါတို့အားလုံးလုပ်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ငါပြောလိမ့်မယ်နည်းနည်းကြိုးစားနှေးကွေး။
သင်၏ဆောင်းပါးများကိုပို့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တင်သူကိုသုံးပါ။ အဲဒီမှာသင့်ရဲ့နည်းနည်းကိုရွေးနိုင်ပြီးအမှိုက်သရိုက်တွေအတွက်စက်ဘီးစီးတာကိုမှားနေရင်အမှားပြင်ပေးပါ။ စူပါလွယ်ကူသည်။
Join လုပ်ပါ သင်၏မေးခွန်းများကိုဆက်လက်ပေးပို့ပါ (သို့) ဤဆောင်းပါး၏အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်များတွင်ဆက်လက်ထားရှိပါ။
ငါတို့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးငါတို့နောက်တစ်ပတ်မှာမင်းကိုကူညီဖို့ကြိုးစားမယ်။ ကျွန်ုပ်၏ Enduro World Series ပြိုင်ပွဲ၏ဆောင်းပါးကိုသင်ကြည့်လိုပါကပြုလုပ်ရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ကိရိယာများကိုညှိခြင်း၏အခြေခံအကြောင်းအရာအားလုံးကိုသိလိုပါကထိုနေရာတွင်နှိပ်လိုက်ပါ။
အပြင်စက်ဘီး,ခေါင်မိုးထိန်သိမ်းလှေငယ်များမှအစရှိသည့်ကုန်ပစ္စည်းများအထိကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုသယ်ဆောင်ရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ကောင်းကျိုးများ -စက်ဘီးစီး(သို့မဟုတ်အခြားဂီယာအမျိုးအစားများ) ကိုကား၏အတွင်းပိုင်းနှင့်ပင်စည်အာကာသသို့အတားအဆီးမရှိသော ၀ င်ရောက်သွားစေသည့်လမ်းမှထွက်သွားသည်။စက်ဘီးစီးအလွယ်တကူမရွှေ့ပါနှင့်။
အဆုံးစွန်နေစဉ်လုံခြုံထိန်သိမ်းကားကိုခိုင်ခိုင်မာမာချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်လို့ကားဟာစည်ဖြစ်ပါတယ်ထိန်သိမ်းသိုင်းကြိုးကတဆင့်တော်တော်လေးလျောက်ပတ်ပါတယ်လုံခြုံတယ်ကထိန်သိမ်းပြီးနောက်ဆိုင်ကယ်စနစ်တကျ။ ပြီးတာနဲ့သူကစနစ်တကျပါပဲလုံခြုံတယ်အပိုဆောင်းလည်စည်း -down (အပိုပြွန်) နဲ့လမ်းမရှိသောဆိုင်ကယ်၏့ကျဆုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။05/19/2004
အောက်ခြေလိုင်းသည်သင်၏ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်သည်လိုင်စင်ပြားဟုတ်တယ်ဖုံးလွှမ်းထားသည်, သင်လက်မှတ်ရနိုင် အကျဉ်းချုပ်မှာ,ဖုံးအုပ်ထားသည်မင်းရဲ့လိုင်စင်ပြားနှင့်စက်ဘီးထိန်သိမ်းသင့်ကိုလက်မှတ်တစ်စောင်ပေးပါ သို့သော်အခြားကောင်းမွန်သောမောင်းနှင်မှုအလေ့အထများကိုသင်ကျင့်သုံးလျှင်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်အဲဒါကသင့်ကိုအပြင်ထွက်ပြီးနောက်မှလိုက်ဖို့မတားဆီးပါစေနဲ့။
ဘယ်လောက်မြန်မြန်သင်တစ် ဦး ဆိုင်ကယ်ထိန်သိမ်းနှင့်အတူမောင်းနိုင်ပါတယ်? အများစုမှာထိန်သိမ်းခွင့်ပြုမင်းရန်မောင်း70 မှ 80 မိုင်အထိစက်ဘီးပူးတွဲ။ သင်၏တပ်ဆင်ပြီးနောက်ဆိုင်ကယ်အပေါ်ထိန်သိမ်းကနေစတင်ပါမောင်းနှင်မှုတဖြည်းဖြည်းနှင့်တဖြည်းဖြည်းမြန်နှုန်းတိုးပွားလာ။ ၁၀ မိနစ်ခန့်အကြာတွင်အတည်ပြုပါထိန်သိမ်း, ကြိုးနှင့်ဆိုင်ကယ်အရပျ၌စနစ်တကျနေဆဲဖြစ်သည်။
ပင်စည်- လည်ပတ်စက်ဘီးထိန်သိမ်းဖြစ်ပေါ်စေ၏အကြီးမြတ်ဆုံးအလားအလာရှိသည်ပျက်စီးခြင်းရန်မင်းကား။ ဒီအမျိုးအစားစက်ဘီးထိန်သိမ်းဆန့်ကျင်ထိုင်တော်မူ၏ကားရဲ့အဆိုပါအနားမှဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်ကြိုးပင်စည်။ ဒီအမျိုးအစားကတည်းကထိန်သိမ်းအမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ရှိတယ်မင်းကား၎င်းသည်၎င်းအားဆန့်ကျင်။ ပွတ်တိုက်စေနိုင်သည်။
ခေါင်မိုးပေါ်စက်ဘီးထိန်သိမ်းခင်ဗျားကိုထားချင်တယ်ဆိုင်ကယ်အပေါ်ခေါင်မိုးပိုပြီးလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့အတွက်မင်းရဲ့နောက်ဘက်နောက်ဘက်ကိုဆက်သွယ်ဖို့လိုတယ်၊ နောက်တွဲယာဉ်တပ်စရာမလိုချင်ဘူးထိန်။ခေါင်မိုးထိန်သိမ်းတစ် ဦးကောင်းတယ်သငျသညျရုတ်သိမ်းစိတ်ထဲမထားဘူးဆိုရင်ရွေးချယ်မှုဆိုင်ကယ်ပေါ်သို့ခေါင်မိုးနှင့်ရှင်းလင်းသောအနိမ့်ရှင်းလင်းရေးကားဂိုဒေါင်သို့မဟုတ်မျက်နှာကျက်ပြanနာမဟုတ်ပါဘူး။
သယ်ဆောင်သူကိုခေါင်မိုးပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီးသင့်ကား၏ပင်စည်ကိုအပြည့်အဝ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတစ်ခုတွင်စက်ဘီးတစ်စီးသာသယ်ဆောင်နိုင်သည်၊ သို့သော်စက်ဘီးများသို့မဟုတ်အခြားဂီယာများသယ်ယူရန်သင်၏ခေါင်မိုးပေါ်၌နောက်ထပ်သယ်ဆောင်သူများကိုသင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ခေါင်မိုးပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသောစက်ဘီးသယ်ဆောင်သူအားလုံးသည်ထိန်သိမ်းရန်သို့မဟုတ်အတည်ပြုပြီးသောစက်ရုံမှတပ်ဆင်ထားသည့်ဂိတ်စနစ်များလိုအပ်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။
ခေါင်မိုးပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသောစက်ဘီးသယ်ဆောင်သူအားလုံးသည်ထိန်သိမ်းရန်သို့မဟုတ်အတည်ပြုပြီးသောစက်ရုံမှတပ်ဆင်ထားသည့်ဂိတ်စနစ်များလိုအပ်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ ချိတ်ဆွဲစက်ဘီးသယ်ဆောင်သူများသည်အသုံးအများဆုံးစက်ဘီးသယ်ဆောင်သူများဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ၁-၅ စက်ဘီးကိုသယ်ဆောင်နိုင်ပြီး၊ သင့်ကားသို့အလွယ်တကူ ၀ င်ရောက်နိုင်ခြင်း၊
သင်၏ Thule ခေါင်မိုးပေါ်တွင်စက်ဘီးတင်သူအားအစားထိုးဘီးအကွက်အဆုံးအဖုံးကိုအစားထိုးလိုက်ပါ။ Thule မှခေါင်မိုးစက်ဘီးသည်သင့်အားမတူညီသော mounting နှင့် loading / load options များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ Thru-axle option များပါဝင်သော fork-mounted သယ်ဆောင်သူများအနေဖြင့်ဘောင်သို့မဟုတ်ဘီးတပ်ဆင်ထားခေါင်မိုးဆိုင်ကယ်ထိန်သိမ်းအထိအရာအားလုံးနှင့်အတူ။